China mpanamboatra PILLOW PILLOW sy mpamatsy | Mia Creative
Famaritana lehibe: POLA ALOHA
Isa isa: G10691958
Famaritana ：POLA ALOHA
Fitaovana: Sombin-javatra, polyester
Habe: W: 8,5 cm D: 8 cm
MOQ: 1000 pcs / loko
Ho an'ny fampiasana isan'andro sy ny fampiasana dia
Amerika, Eropa, Japon, Korea atsimo, aostralia, afovoany atsinanana, afrika, amerika atsimo
Fonosana haben'ny: 59 * 26 * 39 CM
Fonosana entana: 20
Lanja afa-karatsaka: 10,3 kg
Lanja tsy afa-karatsaka: 11,3 kg
20GP habetsahan'ny fitoeran-javatra: 8924 pcs
40GPontainer haben'ny: 18620 pcs
40HP fitoeran-javatra: 22481 pcs
Vidiny tsara, serivisy tsara, fanaterana ara-potoana, vokatra mahasalama tontolo iainana, mari-pankasitrahana BSCI, Laborate Test Test, mpivarotra sy ozinina azo itokisana, trano fanatobiana entana sy fitehirizana, vokatra vaovao ho an'ny tenany manokana, traikefa mpamatsy entana 13 taona amin'ny fivarotana lehibe, fivarotana rojo, mpivarotra ambongadiny ary mpanafatra.
Ity ondana vozona ity dia tsara ho an'ny fanohanan'ny dia amin'ny fiaramanidina. Tsara ho an'ny dia lava mitaingina fiara ihany koa, mipetraka mandritra ny ora maro any amin'ny birao, na mandry eo amin'ny farafara misy anao, ity ondana vozona ity dia manome fanohanana azo antoka, azo antoka ary malefaka amin'ny lohan-doha.
Ity ondana mampihetsi-po ity dia mirefy 12 "x 13", vita amin'ny polyester manontolo, ary azo soloina amin'ny masinina. Io no fialan-tsasatra maivana sy malefaka tonga lafatra ho an'ny olona mandeha matetika amin'ny zotram-piaramanidina sy sidina. Mihazona ny saokanao io ary tsara indrindra ho an'ny torimaso tsy misy fanaintainana. Zava-dehibe ny fanamaivanana kiropraktika, ary ny ondana lohan'ny diantsika no mpatory an-ondana ambony indrindra izay mandeha tokoa!
Tsy misy hatoka maharary intsony! Ity ondana fitsangatsanganana kely ity dia tsy vitan'ny hoe matory anao fotsiny fa matanjaka koa amin'ny fampiononana rehefa mamatotra ny tendanao izy ary mitazona anao tsy ho henjana. Tsara ampiasaina ho toy ny ondana fandehanan'ny zaza, ondana torimaso, ondana fandehanan-torimaso, ondana fitsangatsanganana an-tenda, ondana torimaso mandeha, ondana hatoka ho an'ny dia fiaramanidina ary ondana fitsangatsanganana mahafinaritra.
Ny ondana kely ataontsika dia ny ondana fitsangatsanganana tonga lafatra noho ny endriny maivana sy matevina. Azonao atao ny misolo tena ny ekipa mpilalao baolina kitra ankafizinao amin'ny ondana kely misy anao, mora entina ary manidina. Miaraka amin'ny landy toy ny mikasika azy, ity ondana mpanohana ity no ondana fandehanana farany.
Ity dia ondana fitsangatsanganana mini nahazo alalana ofisialin'ny NFL ary manana fanidiana ny bokotra izay azo ampiasaina hiraikitra amin'ny valizy na ny fehikibo fehikibo mba ho mora entina. Mety amin'ny fivezivezena izy io ary afaka mifanaraka amin'ny ankamaroany. Aza mandeha intsony raha tsy misy ondana fandehanana any aminao. Mialà sasatra mora foana ary miantehera amin'ireo ondana ho an'ny fampiononana farany.
Teo aloha: Hidin-trano mitambatra 4 isa
Manaraka: FIVORIANA TRAVEL